WCC3 Mod Apk Download ho an'ny Android [Nohavaozina 2022] | APKOLL
Aprily 20, 2022 Janoary 11, 2022 by Reyan Ahmad
Salama tia Cricket, miverina miaraka amina lalao modded mahavariana ho antsika rehetra izahay. Araka ny fantatrao fa ny WCC3 dia navotsotra teny an-tsena ary misy olona an-taonina maro te-hahazo ny mod ny azy. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny WCC3 Mod Apk.
Betsaka ny tranokala hafa manaparitaka vaovao sandoka momba ny fanolorana ity fampiharana ity. Fa ny hany atolony dia ny lalao version taloha. Noho izany isika dia rehefa avy nitsapa azy tamin'ny fitaovana Android sasany ary miasa tsara ho antsika. Raha te hampiasa azy ianao dia tokony hahafantatra kely momba izany.
Mijanona miaraka aminay ary hizara izay rehetra fantatray momba ity app ity izahay. Manantena izahay fa tianao izany ary aza adino ny mizara izany amin'ny namanao, koa andao atomboka daholo ny momba ity app ity.
Topimaso momba ny WCC3 Mod Apk
WCC3 Apk dia rindrambaiko filalaovana Android, izay ampahany farany amin'ny andiany World Cricket Championship. Navoakan'i Nextwave Multimedia ary ny ampahany voalohany dia navoaka tamin'ny 2011. Tamin'ny 2021 World Cricket Championship Rivals dia navotsotra.
Io no lalao cricket sy zava-misy ary mandroso indrindra. Manolotra anao hilalao an-tserasera amin'ny namanao izy io, midika izany fa afaka milalao 2v2 ianao. Io no lalao Cricket-video tokana izay manome multiplayer an-tserasera sy hitantanana ny ekipanao.
Tsy maintsy mitantana ny ekipanao manontolo ianao ary manavao azy ireo rehefa manana ny vola madinika ianao. Azonao atao ny misafidy ny bowler, ny batsman ary ny fielders. Amin'ity lalao ity dia tsy maintsy miasa koa ianao, izay midika fa tsy maintsy manao ny baolina voasambotra ianao, ary mametraka ny fotoana marina.
Lalao 3D manolotra ihany koa Fanehoan-kevitra Hindi, izay notontosain'ny mpaneho hevitra matihanina Indiana Aakash Chopra. Io no lalao video e-panatanjahantena voalohany, izay nanao sonia mpaneho hevitra matihanina ho mpaneho hevitra amin'ny sehatra nomerika.
anarana Tompondakan'ny Cricket World
Anaran'ny fonosana com.nextwave.wcc3.moddroid
Endri-javatra lehibe an'ny WCC3 Mod Apk
Rehefa miresaka azy io isika, dia misy lafin-javatra sasany amin'ilay maodely mod. Hizara ny sasany amin'ireo fiasa ireo aminareo rehetra aho. Afaka mahita fiasa misimisy kokoa ianao ary mizara izany aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra. Aza misalasala mampiasa ny fizarana hevitra.
Esory avokoa ireo sehatra rehetra
Vohay ny Roosters rehetra
Mpilalao fanavaozana maimaimpoana
Azo ampiasaina ve ny WCC3 Modded Apk?
Eny, azo antoka ny fampiasana azy. Notsapainay tamin'ny fitaovana Android samihafa izy io ary mety tsara ho anay. Saingy araka ny ahalalanao fa kinova modded io, noho izany tsy afaka manome karazana antoka fiarovana ho an'iza na iza izahay. Raha te hampiasa azy ianao dia azonao atao samirery.
Ara-dalàna ve ny fampiasana WCC3 Modded Apk?
Tsia, tsy ara-dalàna ny fampiasana azy. Mifanohitra amin'ny fitsipiky ny lalao rehetra ny manova sy mampiasa tsy nahazoan-dalana avy amin'ny mpamorona. Noho izany dia mila miresaka amin'olona ianao alohan'ny hampiasanao ity app ity. Tsy mpamorona an'ity app modded ity izahay ary tsy mampiroborobo azy io.
Ahoana ny fampidinana WCC3 Mod?
Manome rohy azo antoka izahay hisintonana ity fampiharana ity. Ilainao fotsiny ny mahita ny bokotra fampidinana amin'ity pejy ity, izay hita eo amin'ny farany ambony sy ambany. Mila manindry ny iray amin'ireo bokotra ireo ianao ary miandry minitra vitsivitsy mandra-pahavitan'ny fampidinana azy.
Ahoana ny fametrahana WCC3 Mod Apk?
Mba hametrahana ity fampiharana ity amin'ny fitaovanao dia mila manova fanovana sasany ianao. Hizara ny fizotran'ny fametrahana amin'ireo dingana etsy ambany izahay. Azonao atao ny manaraka ireo dingana ireo mba hametrahana fametrahana tonga lafatra amin'ny fitaovana Android.
Andraso segondra vitsy
WCC3 Mod Apk no fampiharana tsara indrindra amin'ny lalao Android. Io no mod an'ny WCC3 Apk izay manolotra anao vola madinika volamena tsy misy fetra sy ny maro hafa. Afaka mahazo izany rehetra izany maimaim-poana ianao, izay midika fa tsy mila mandany vola na ariary iray amin'izany ianao.
Mijanona ao an-trano Mijanona soa aman-tsara, mitsidika hatrany ny Website.
Sokajy Apps Tags WCC3 Mod, WCC3 Mod APK, App WCC3 Mod Post Fikarohana